Kugara neInvestment yeBelgium neGolden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muBelgium kune:
● Kugara nekudyara muBelgium
● Ugari nekudyara kubva kuBelgium
● Visa yegoridhe muBelgium
● Pasipoti yechipiri kubva kuBelgium
● Kugara nekudyara kweBelgium nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muBelgium uye Magweta e Kugara neInvestment muBelgium uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muBelgium zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara neveInvestment vamiririri veBelgium vanopa mabasa ekugara nekudyara muBelgium, Kugara nehurongwa hwekudyara muBelgium, Kugara nehurongwa hwekudyara muBelgium, Residency yechipiri nekudyara muBelgium, mbiri Residency nekudyara muBelgium, ugari uye ugari nekudyara muBelgium , Kugara zvachose nekudyara muBelgium, Kugara kwechinguva nekudyara muBelgium, Kugara nehurongwa hwekudyara muBelgium, Kugara nenzvimbo dzekudyara muBelgium, Citizenship nekudyara muBelgium, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muBelgium, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBelgium, wechipiri Citizenship nekudyara muBelgium, hunyanzvi hwehukama nekudyara muBelgium, pekugara uye ugari nekudyara muBelgium, kugara nekugara nekugara nekudyara muBelgium, hupfumi Citizenship zvirongwa muBelgium, Ugari nehurongwa hwekudyara muBelgium, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBelgium, wechipiri pasipoti muBelgium, yechipiri passp ort zvirongwa muBelgium, yechipiri pasipoti chirongwa muBelgium, mbiri repiri pasipoti muBelgium, pekugara uye yechipiri pasipoti muBelgium, repamutemo repasipoti repiri muBelgium, yechipiri pasipoti nekudyara muBelgium, yechipiri ugari pasipoti muBelgium, yechipiri pasipoti scheme muBelgium, yechipiri zvirongwa zvepasipoti muBelgium, vhiza yegoridhe muBelgium, vhiza dzegoridhe muBelgium, zvirongwa zvendarama zve visa muBelgium, chirongwa chendarama vhiza muBelgium, yechipiri vhiza vhiza muBelgium, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muBelgium, mbiri yegoridhe visa muBelgium, mugari uye vhiza yegoridhe. muBelgium, kugara uye vhiza yegoridhe muBelgium, mugari vhiza mugari muBelgium, chirongwa chendarama vhiza muBelgium, zvirongwa zvegoridhe vhiza muBelgium.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muBelgium nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muBelgium yeResidency nekudyara: EUR 500,000
Nhanganyaya Belgium uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveBelgium
Belgium ine hupenyu hwepamusoro mwero uye zvinzvimbo pakati pezvakanakisa gumi kubva pamatanho mashoma eOECD's Zvirinani Hupenyu Index, ine yakajairwa mhuri hombe kuwanda pamusoro peiyo OECD zvakajairwa. Kunze kweizvozvo, kuvepo kwepasi rose muBrussels kwechipiri kuNew York chete, pamwe nenzvimbo dzinosvika chiuru nemazana mashanu dzinoshandisa nhume dzinosvika zviuru zvitatu uye hwaro hwekuwedzera kwemakumi maviri emirairo yeEuropean yepakati yemasangano epasirese.
Kwenguva yakareba yasara muBrussels, pane danho rakakura rekuti munhu akabhadhara uye muridzi wemba anosanganisira pekugara, mukati memaguta gumi nematanhatu eguta uye mudhorobha, kubva studio studio kuenda kumanors. Tsvaga chiyero chemapoinzi akakosha pane yedu yekugara chiteshi, semuenzaniso, pekugara muBelgium, nharaunda dzeBrussels, kana kutsvaga imba muBelgium ichishandisa zvishandiso zvekugara zveExpatica.
Wepamusoro-notch kiriniki yekutarisisa inowanikwa zvakanyanya, yakavandudzwa nemakiriniki makuru ekurapa ekoreji. Inowedzerwawo seinodhura kupfuura iyo US, uye dzimwe nguva dzakakwenenzverwa dzinoratidza kuti Belgium iri kushanduka kuita hotspot yekiriniki indasitiri yekufamba kubva kune nyika dzinobatanidza.
Kana iwe uri kufunga nezvekuenda kuBelgium, tsvaga kuti nei multicultural Belgium iri iyo sisitimu yakanaka yekutamira kune imwe nyika.
Zvizoro zveBelgium zvine mutsika wemarudzi zvinopa guta rayo reBrussels tense vibe ine dzakasiyana siyana manejimendi epasi rose nemahofisi pachirongwa chekurerutsa kunyangwe iyezvino aripo pat-pat.
Imba yeEuropean Union (EU), kushanya kushoma kuenda kumakuru makuru epasirese, uye ine mitauro mitatu yemasimba (French, Dutch, neGerman) uye netiweki yakakura pasirese.
Zviri zvakare zvine musoro kurarama. Brussels, uko vakawanda vekare-patsva vanosarudza kuzvimisikidza, haina kudhura pane mamwe maguta makuru ekumadokero eEurope, semuenzaniso, London, Copenhagen, Vienna, uye Zürich, sekuenderana neMercer's Mutengo Wekurarama masosi. Zvakare, Belgium inoratidzira yakasununguka yakavhurika mota sisitimu ine yakatsetseka-inomhanya yakarongedzwa sangano rekufambisa, metro, uye tambo mota, zvichiita kuti zvive nyore kuenda kumagumo evhiki mafambiro ekufambisa kutenderera Belgium (nekumwe kupera kwevhiki kuramba kunyange hafu limited) kana kutobhururuka uchienda kune imwe nyika yakavakidzana. Kana zvasvika pakudya nheyo, nyika inofara nesarudzo uye nemhando yezvazvinodyira. Chokwadi chinotaurirwa, nzvimbo dzeBrussels pakati penzvimbo dzepamusoro dzemaguta eEurope ane nyeredzi dzeMichelin. Pamwe chete, iyo Michelin Nhungamiro yeBelgium 2016 yakaratidza maresitorendi matatu ane nyeredzi nhatu, makumi maviri eateries ane mbiri-nyeredzi, uye 20 eateries ine nyeredzi imwe-nyeredzi. Zvakadaro, musanganiswa wezvaunotarisira zvakanyanya kunyaradzo dzezuva nezuva uye zvinoshamisa pasuru pasirese, zvikoro, uye masangano akasiyana, mukuwedzera kune yakanakisa ratidziro yesarudzo dzekudya, kuvaraidza, uye kufamba, zvinoreva kuti Belgium inopfuura mira yakatarisana nezvimwe zvakakosha ex- pat kunzvimbo. Kunyangwe paine saizi diki, Beligi mutambi mukuru wepasi rose: Mitengo yeBelgium inowedzera inosvika pamusoro pe117% yeGDP yayo, uye muna80, sekureva kweWorld Trade Organisation, yaive yegumi nematatu inonyanya kukosha kutumira nyika pasi, ne mabhizimisi anokosha kupfuura € 2014 mabhiriyoni. Icho chingangoita 400% yezvinhu zvepasi rose zvigadzirwa - zvisingaiti nyika ine pasi pe2.5 € yehuwandu hwevanhu.
MaBelgium vanhu havana kubvumidzwa: mune yekupedzisira sarudzo yezvematongerwo enyika, 89% yevavhoti vakanyoresa vakagumisa kuvhota - imwe yeakakwidziridzwa kupfuura mamwe ese 34 OECD nyika uye akakwirira zvakanyanya kupfuura iyo 68% zvakajairwa. Nyika ine imwe yeakaomeswa anodiwa mademokrasi masisitimu epasi.
Belgium yakajairika zvikuru: Kunyangwe hazvo chiRoma Katurike, chiPurotesitendi, chiIslam, chiJudha, Anglicanism, Greek Orthodox ndizvo zvitendero zvinoonekwa, sekuongorora kweEuropean Social Survey, inopfuura 50% yevagari havasi vanozvipira.
Vagari veBelgium vakapfuma kupfuura zvakajairika: sezvakaratidzirwa neOCED 2015 mushumo, yakajairwa mhuri yemari yakawanda yakaongororwa pa € ​​89,057, yakati rebei kupfuura zvakajairwa mae € 84,546.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeBelgium
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muBelgium
Kugara nekudyara kweBelgium
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweBelgium
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vemuBelgium
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweBelgium
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweBelgium
Belgium ndiyo imwe yenyika dzine mukurumbira pasi rese, iro guta guru reBrussels rinogadzira akawanda akakosha eEU masangano. Chikamu chenyika chine mwero wepamusoro wehupenyu, wepasirose-dzidzo uye hutano, pamwe nekudyidzana kwakanangana nemweya wakanaka uye kufamba kwenyika. Kutenda kunhengo yeSchengen, iyo yekugara yeBelgian inobvumidza iwe nenhengo dzemhuri yako kuwana vhiza yavo yekupinda muEurope yese.
Mhuri yekupinda muBelgium
Mushure mekunge mawana mvumo yekugara, nhengo dzemhuri yako, kusanganisira wawakaroorana naye uye vana vaunotarisira, vanogona kuwana mvumo yekugara zvichibva pakubatanidzwazve kwemhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muBelgium insite
Nzira yakakosha kwazvo yekunyora kunyoresa kwekudyara inoratidza kuti bhizinesi rako richava nemupiro wakakura kuhupfumi hweBelgium nekugadzira mabasa emuno kana kuwana zvinhu kana masevhisi kubva kumakambani emuno. Iwe unogona kutora chikamu cheBelgian chekambani nyowani yeBelgium kana kambani yepasi rese. Iyo yakajairwa kureba kwekunyorera maitiro ndeye 3-8 mwedzi, chero chero magwaro anodikanwa akaendeswa.
Ratidza kuti bhizinesi rako rinogoneka, kunyorera kwako kunofanirwa kusanganisira chirongwa chebhizinesi, pamwe nebhizinesi uye bhizinesi mari yekushandisa, zvirinani mumwedzi mishoma yekutanga kushanda nekambani yako. Mvumo inobhadharwa kare mugore rimwe chete uye inogadziridzwa pahwaro hwekuita kwako bhizinesi. Iko hakuna kudikanwa kwemuviri mushure mekupihwa kwako mvumo. Unogona kunyorera kuve mugari weBelgium mushure memakore matatu ekugara, uye maitiro acho anowanzo zadza kweanowedzera makore maviri.
Mari inodiwa yeBelgium
Pakati pegore rekutanga, iwe unofanirwa kushandisa anosvika zana nemakumi mashanu ezviuru euros kune rako bhizinesi reBelgian mari, kusanganisira mari dzakadai sekudzokorodza fizi, mutengo wezvemitemo, chivakwa (imba, hofisi, nzvimbo yebasa, nezvimwewo) kubhadharisa uye vashandi. Kwenguva yemakore mashanu, usati wawana ugari hwemo, unofanirwa kuverenga chete mazana mashanu ezviuru euros.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweBelgium
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuBelgium uye Residency ne Investment Lawyers yeBelgium inopa vatengi uye mhuri dzavo muBelgium nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuBelgium, kugara nekudyara kubva kuBelgium uye nemimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuBelgium kana Golden Visa kubva kuBelgium kana ugari nekudyara kubva kuBelgium kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuBelgium, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Belgium kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muBelgium uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuBelgium uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veBelgium:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeBelgium, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zveBelgium, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira zvekuBelgium, inokwanisika Kugara nevanoona nezvekudyara kweBelgium, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara kweBelgium uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeBelgium
Kugara nekudyara kubva kuBelgium kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muBelgium kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuBelgium kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuBelgium kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuBelgium kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuBelgium.
Goridhe visa zvirongwa muBelgium kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuBelgium kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuBelgium kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuBelgium kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweBelgium kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muBelgium nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana zvakanaka kudzoka mukudyara muBelgium, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweBelgium. Isu tinosungirirwa nevashoma vashambadziro vezvivakwa muBelgium vane rekodhi rekodhi uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka muBelgium, vachitora zvakanakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveBelgium nemari yekudyara muzvivakwa muBelgium.
Unoda kuziva - Belgium Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reBelgium kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa zvekubudirira kwako Kugara nekudyara kuBelgium Yedu yakajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuBelgium inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuBelgium kana kuenda kuBelgium, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweBelgium kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeBelgium uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kweBelgium, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kweBelgium isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye emhuri nhengo pasipoti
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera Belgium. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweBelgium uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kweBelgium zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveBelgium.
Kamwe kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweBelgium chikatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muBelgium kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muBelgium:
Residency nebasa rekudyara muBelgium hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuBelgium.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveBelgium hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muBelgium kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuBelgium.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweBelgium hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muBelgium.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeBelgium haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muBelgium.
Residency nebasa rekudyara muBelgium haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muBelgium
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweBelgium haruwanikwe kune vanhu veBelgium vanoita mukutengesa, kuchengetedza muBelgium, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeBelgium haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeBelgium hadzisi dzezvitendero uye masangano avo anobatsira muBelgium.
Residency nebasa rekudyara mu Bherujiyamu haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muBelgium.
Kugara Kwedu magweta muBelgium haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muBelgium.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veBelgium neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muBelgium kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muBelgium.
Kugara nekudyara muBelgium nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muBelgium yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muBelgium.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye neBelgium zvinodiwa nemutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuBelgium inopa mitengo yakachipa, iine mukana wakanakisa wekubudirira kweBelgium.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuBelgium kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuBelgium.
Ruzivo Rwekugara nekudyara kwekukumbira kweBelgium nevamiriri vepamutemo veBelgium vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine vakukuri vakanakisa nevamiriri veBelgium kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuBelgium uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuBelgium
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Belgium, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuBelgium kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuBelgium
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweBelgium ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veBelgium, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweBelgium uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeBelgium
Maitiro Ekubvumidza Basa kuBelgium
Kwekugara kwenguva pfupi muBelgium
Permanent Residence muBelgium
Embassies uye ma Consulates eBelgium
Kugara neInvestment muBelgium uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muBelgium nekuda kwekukurumidza kana kweramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kuenda nemhuri yako kuenda kuBelgium nekudyara mari, isu semumwe wako kuBelgium, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye kana nguva yaungade muBelgium nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekudyara kwekudyara kweBelgium, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muBelgium, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veBelgium zvichitigadzira one-stop shop yeBelgium nenyika 106.
"Takasimudzira makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reBelgium mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweBelgium nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro muBelgium nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muBelgium kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muBelgium yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muBelgium
Chero ani investor anotamira kuBelgium angazoda account yako yebhangi muBelgium uye account yebhangi yekambani muBelgium, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muBelgium
Kana iwe uchida kubvunza muBelgium, ye mhinduro dzemadhijitari muBelgium senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muBelgium kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Belgium kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muBelgium kutanga pakarepo muBelgium.
HR Services muBelgium
Our kambani inoshandira vanhu muBelgium inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muBelgium vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeBelgium
Bhizinesi foni nhare dzeBelgium pamwe ne nhamba dzeBelgium Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muBelgium
Accounting, kushingairira kwakakodzera muBelgium uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muBelgium
Setup bhizinesi muBelgium
Mushure meResidency nekudyara kuBelgium, setup bhizinesi mu Bherujiyamu.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muBelgium
Kugadzira Webhu muBelgium
Ecommerce Development muBelgium
Webhu kuvandudza muBelgium
Kuvandudza kweBlockchain muBelgium
App Kubudirira muBelgium
Software Kubudirira muBelgium
Magweta e Residency neInvestment muBelgium
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro dzeBelgium uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuBelgium, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeBelgium ine vamiririri vakanakisa vekupinda muBelgium. kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeBelgium vanhu nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuBelgium inopa mhinduro dzakagadzirwa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuBelgium, pamvumo yako yekugara muBelgium inogamuchirwa.
Simba regweta reBelgium rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muBelgium. Kana iwe uri muBelgium kana kuronga kushanyira Belgium, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuBelgium kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeBelgium. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weBelgium.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muBelgium
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muBelgium?
Kugara nekudyara kuBelgium, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweBelgium kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBelgium kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuBelgium, kugara nehurongwa hwekudyara kweBelgium inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kweBelgium, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muBelgium, kugara kwakanakisa nemagweta ekudyara muBelgium uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara muBelgium, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiririri vezvekudyara muBelgium, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika. muBelgium.
Kugara nekudyara mabasa eBelgium | Kugara nevamiriri vezvekudyara muBelgium | Kugara nemagweta eInvestment muBelgium | Kugara nemagweta ekudyara muBelgium | Kugara nevanoona nezvekudyara kweBelgium
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muBelgium?
Ugari nekudyara kuBelgium, zvinogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweBelgium kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBelgium kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muBelgium. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuBelgium, ugari nehurongwa hwekudyara kweBelgium inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuBelgium, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muBelgium, ugari hwepamusoro nemagweta ezvekudyara muBelgium kuva mugari wemo wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muBelgium, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muBelgium.
Affordable Investor immigration services kuBelgium | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira muBelgium | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muBelgium | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muBelgium | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muBelgium | Affordable immigration law firms kuBelgium
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muBelgium?
Yechipiri pasipoti muBelgium, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weBelgium kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBelgium kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuBelgium, yechipiri pasipoti chirongwa cheBelgium chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eBelgium, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirese muBelgium, magweta echipiri epasipoti muBelgium uye akanakisa echipiri mapasipoti ekuBelgium, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muBelgium, uye akanakisa mafemu ekupemha ekupinda muBelgium.
Chechipiri pasipoti services kuBelgium | Chechipiri pasipoti vamiririri muBelgium | Yechipiri mapasipoti magweta muBelgium | Yechipiri mapasipoti magweta muBelgium | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuBelgium
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muBelgium?
Ndarama vhiza muBelgium, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeBelgium kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBelgium kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa. goridhe vhiza masevhisi eBelgium, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muBelgium, akanakisa egoridhe vhiza magweta muBelgium uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veBelgium, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muBelgium, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muBelgium.
Goridhe visa services yeBelgium | Goridhe vhiza vamiririri muBelgium | Magoridhe egoridhe magweta muBelgium | Magoridhe vhiza magweta muBelgium | Goridhe vhiza varairidzi veBelgium
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muBelgium?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muBelgium iEUR 500,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuBelgium yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muBelgium nevamiriri muBelgium vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muBelgium.
Kugara nekudyara kuBelgium kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuBelgium uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa zveBelgium ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunza yeResidency neInvestment kuBelgium, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuBelgium kana investor visa kuBelgium?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuBelgium kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuBelgium kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuenda kuBelgium kubva kuEurope, Residency nekudyara kuBelgium kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuBelgium kubva kuMalaysia, Residency nekudyara kuBelgium kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuBelgium kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuBelgium kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuBelgium kubva kuNepal, Residency nekudyara kuBelgium kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuBelgium kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeBelgium
Kumbira kubvunza Mahara kweKugara Kwako neInvestment kuBelgium
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeBelgium
Flanders Chiremera (www.vlaanderen.be/)
Royal Library yeBelgium (www.kbr.be/)
National Bank yeBelgium (www.nbb.be)
Belgian Ministry yezvekunze
Flanders Zvekunze Investment Office (www.ffio.com)
Interuniversity Council yeFrench Community yeBelgium (www.ciuf.be/)
Belgian Paramende (www.fed-parl.be/)
National Institute of Statistics (http://statbel.fgov.be/))
Federal Ministry yezvebasa uye yevashandi (www.meta.fgov.be/)
Federation of Chambers of Commerce neindasitiri yeBelgium
Belgian Seneti (www.senate.be)
Iyo Central Bank yeBelgium.
Banking uye Finance Commission (www.cbfa.be)
Dare Repamusoro soro reBelgium (www.raadvst-consetat.be/)
Belgian Federal Hurumende (www.belgium.fgov.be/)
Dare reVamiriri veBelgium (www.lachambre.be/)
Ministry of Zvehupfumi.
Belgian Trade kukurudzira Sangano
Link to Dhipatimendi Rekupinda muBelgium , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muBelgium